Tag: vidiyo ecommerce | Martech Zone
Kpido: ecommerce vidiyo
Dị na-arịwanye elu na-eji teknụzụ iji mepụta ahụmịhe ọhụụ ọhụụ na oge ịnọ n'ụlọ. Ma, n'otu oge ahụ, a na-amanye ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịchọgharị ụzọ ọzọ ha ga-esi enweta ego n'otu oge mgbe a na-emechi ihe nkiri na ebe egwu. Banye droppTV, usoro ikpo okwu ntaneti izizi nke mbụ nke ụwa. Ikwuputa ya na vidio egwu, droppTV na-eme ka ndị na-ege ntị lelee ọdịnaya ka ha na-agagharị na ntanetị nke ọma ụlọ ahịa pọpụtị mebere ịzụta ụdị uwe nwere oke. Ikpo okwu na-enyere ndị okike (na akara aka) aka inweta ego